यात्रा संग्रह | एक ट्रेन सेव
पढ्ने समय:4मिनेट त्यहाँ पेरिस बारेमा प्रेम गर्न धेरै छ. जहाँ तपाईं पनि सुरु गर्छन्, दायाँ? मनमा आउने पहिलो कुरा एफिल टावर र Louvre जस्तै ठूलो साइटहरु छ. तर पनि किन शहर मा लुकेका रत्न पत्ता छैन? हामी सुरु गरौं…